Izakhamuzi zasezindlini ezinama-multi-storey azimeleli egcekeni lazo ngaphandle kwemibuthano yabesifazane besendulo emnyango webhentshi. Ukuhleka nokuhleka kuvelaphi? Futhi izindaba ezinhle kakhulu "ezishisayo"? Bafunda ngakho konke okwenzeka kuqala! Yibo kuphela, ngokombono wabo, abanelungelo lokuxoxisana nabo bonke abadlulayo futhi balahlwe ngokuziphatha okungalungile.
Isono noma isifo?
Kunezincazelo eziningana ezihambisana negama elithi "ukulahla". Lo mqondo utholakala emisebenzini engokomoya, ngokomthetho, nasenkulumweni yezinhlamvu ezihlukahlukene.
Okokuqala, kufanelekile ukucabangela umqondo wokulahlwa kusukela ekubukeni kwesonto. Ukugxekwa kungenye yezono ezinkulu ezihlanganisa ukunyundela, ukuhleka umuntu othile, kanye namanga nokumangalelwa okungafanele.
Amazwi amabi awazange abuyele ngokuphindwe kayinkulungwane, obaba abangcwele banxusa labo besonto ukuba bangahluleli abantu ngokuhleba nokuhleka kwamahemuhemu, futhi futhi bangakhohlisi ize. Phela, ukwahlula isabelo sikaNkulunkulu, hhayi nje abantu.
Kodwa njengoba wazi, bambalwa bangagcina kalula izimfihlo zabanye abantu noma bahlale bethula ngaphandle kokuveza umbono wabo. Lokhu kuziphatha akukwazi ukubizwa ngokuthi umkhuba, kunalokho, kuseyisifo. Ngokuvamile kuvumelaniswe nesifiso sokuba phakathi kokunakwa, ukuba "okuyinhloko" ngisho nangomzuzwana omfushane.
Ukugxekwa noma ukulahlwa kuyingxenye yombukiso wezinkulumo ezithandwayo ezithandwayo kuthelevishini. "Ukuvuselela amathambo" ezinkanyezini, odumile kanye nezombangazwe, izakhamuzi ezivamile zibonisa ukunganeliseki kwabo ngokuphila kwazo kanye nokuthi zihlulekile ukufeza imigomo ethile.
Inani "lokulahla" emthethweni lusetshenziswa futhi. Ngoba abahluleli nabameli "ukulahla" ukugweba ukujeziswa ngenxa yobugebengu obuzimele. Isilinganiso sokujeziswa sithathwa yijaji noma ijaji, eholwa yizihloko zomthetho.
Kodwa into enkulu kunoma yiluphi uvivinyo yisikhathi lapho inkantolo igwetshwe umsolwa futhi idlulisa isigwebo. Ngemuva kwalokho, uma inhlawulo ikhethwe ngokungalungile noma amaqiniso anikezwe ngummeli wommangalelwa, efakazela ukuthi angabonanga, akacatshangelwa, umuntu angathola ukuhlaselwa ngenxa yokuphila.
Ukusola, ukulahlwa yisifo esikhulu kakhulu emphakathini wanamuhla. Abantu bayakujabulela ukungena empilweni yabanye. Ukugxekwa kuyinto engalungile noma yimuphi umuntu ongakwenza ngaphandle kokwazi amaqiniso eqiniso ahlobene nesimo esixoxwe ngaso.
Igama elihle kakhulu emhlabeni. Amagama amahle angamaNgisi